င ဝန် န ဒီ: August 2012
ငါတို့ ရွာမှာတော့ ခြင်္သေ့က မြက်စားတယ်ကွ
ရွာမှာ ခွေးအတွေ တောထဲကနေ ဝင်ဝင်လာတော့
ကြက်တွေ ဆွဲ ဘာတွေ ဆွဲ ဆိုတော့ ရွာ ကလန့် လာရော
ဒီလိုနဲ့ရွာလူကြီးတွေ က ကျား အဆီ ကို ရှာ ခြင်္သေ့ အရေခွံ အတု ကို ချုပ်ပြီး
နွားကြီးကြီး တွေ ပေါ်မှာ အရေခြုံ ပေး ကျားဆီ လိမ်းပေးလိုက်တော့
ခွေးအ တွေ ရန် က အတော်သက်သာသွားတော့တယ်
ဒီလိုနဲ့မြို့က အလည်လာသူတွေ က ခြင်္သေ့ ကြီး ကို ကြည့်ပြီး ကြောက်နေကြသတဲ့
ရွာသား က မြို့ သား ကို ပြောလိုက်တယ်
ငါတို့ ရွာ ကခြင်္သေ့ က မြက်ပဲစားတာပါ ကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွ..
မြို့ သား က ဒါဆို ခြင်္သေ့ လို့ ထင်နေတာတွေ ကို မေ့လိုက်တော့ မယ်
ရွာပြန်လာရင် တော့ ခြင်္သေ့ က မြက်ပဲ စားတာ ကိုး
ရွာသား က ဒို့ ရွာမှာတော့ ဘယ်ခြင်္သေ့ဖြစ်ဖြစ် မြက်ပဲ ကျွေးမှာပါ...
Black List ဆိုတာထက် ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံဆိုရင်
အခု Black List ဆိုတာထက် မြန်ပြည်သားတွေ အတွက် ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံဆိုတာ ကို ပြောချင်ရင်
ဘယ်နိူင်ငံမှာ မြန်ပြည်သား ဘယ်နှစ်ယောက် ဘာတွေ အကူအညီပေးတယ်ဆိုတာတွေ က အဓိက ကျမှာပါ
အခုလဲ အမဲစာရင်းမှာပါလည်း ပြန်လို့ ရတာတွေ ခွင့်ပြုတာတွေ ရှိနေပါတယ်
အချိန်တန် လက်မှတ် ခံဝန်ထိုး ပြန်လို့ ရတဲ့ မြန်ပြည်ပါ..
တစ်ခု ရှိတာက ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံတည်ဆောက် နေပါပြီ ဆိုချိန်မှာ
အာဏာရှင်လက်ထက် က အမဲစာရင်း ကို ထုတ်ပြောလိုက်တာကမှ
စစ်အာဏာရှင် နောက်မှာ ကြိုးကိုင်နေတာ ကို မသိမသာ ဖွင့်ဟလိုက်သလိုများဖြစ်နေမလားပေါ့
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲလို အတွေးတွေ ခဏထားလိုက်ပြီး ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်နေချိန် မှာ
ဘယ်တိုင်းပြည်မှာ မြန်ပြည်သား ဘယ်နှစ်ယောက် ဘယ်နှစ်ယောက်ကတော့ ဘယ်နိူင်ငံသားခံယူသွားတာတို့ 
မြန်ပြည်သား ဘယ်သူတွေ ကို ဘယ်လို ကူညီနေတာတို့မြန်ပြည် ကို လှူတန်းလိုသူတွေ ကို ပူးပေါင်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတို့ ကမှ မြန်ပြည် ဒီမိုကရေစီ ခြေလှမ်း အမှန်ဖြစ်နေမှာပါ...
မြန်ပြည် ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရာမှာ နောက်ပြဿနာ ရှင်းနေတာနဲ့ တင် နှစ်တွေ တော်တော် ကြာမှာလားပေါ့...
မြန်ပြည်သားတိုင်း၏ အကျိုး ကို အနည်းငယ်ကြည့် ယုံမျှဖြင့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းပိုမိုဖြောင့်ဖြူးစေရန် ရည်သန်ပါသည်။
အမှိုက်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကျော် ကနေ ၈၀၀၀ အထိပေးဝယ်တဲ့ မြန်မာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံ
မြန်ပြည်မှာ အရာရာ တန်ဖိုးထားတာများ အမှိုက် ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကျော် ပေးဝယ်အောင် လုပ်နိူင်တဲ့ဋ္ဌာန ရှိနေတာ ထူးထူးခြားခြားပါ။
အမှိုက် ကို ရွှေ ထက်ဈေးတတ်အောင် လုပ်နိူင်တာ
Black List မှာ မပါချင်ရင်
မြန်ပြည် ကို သမ္မတ ကခေါ်တော့ ပြန်တာတွေ များလာတာရယ် အခုတော့ ဘလက်စ်လစ် မဟုတ်တဲ့သူတွေ စာရင်းထွက်လာပါလေရာ..
ဒါနဲ့ မြန်ပြည်လည်းပြန်ချင်သူတစ်ယောက်က ဘလက်စ်လစ် ထဲလည်း မဖြစ်ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရရင်ကောင်းမလည်းပေါ့
တစ်ယောက်က မပူပါနဲ့ ကွာ..
အခုဆို ညွန့် ပေါင်းအစိုးရ ထောင်တဲ့ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း လည်း ဘလက်စ်လစ်မှာ မပါတော့ဘူး
လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့ မိုးသီးဇွန်လည်း ဘလက်စ်လစ်မှာမပါတော့ဘူး
ကဲမင်းကရော ဘလက်စ်လစ်မှာ မပါချင်ရင်
သူတို့ လို အဝေးရောက် အစိုးရထောင်.. လက်နက်ကိုင်တော်လှန် ပြီးရင် လေကြီးမိုးကြီးပြော.
လက်သိပ်ထိုး လက်မှတ်ထိုး အဲဒါဆိုဘလက်စ်လစ်မပါတော့ဘူးကွ...
လူတိုင်း ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံမှာ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရနိူင်ကြပါစေ..
နိူင်ငံခြား မှာ အဆောင်စနစ် ကောင်းချက်ကတော့
မြန်ပြည် မှာ အဆောင်တွေ ပြန်ဖွင့်ပေးရမှာ ကြောက်နေသော ဒီမို ကရေစီ အစိုးရ လန့် စရာ မလိုတာတွေ ဖြစ်ရအောင် ရေးတာပါ..
အဆောင်တွေ ပိတ်တာ က ၁၉၉၆ ဒီဇင်ဘာ မှာဖြစ်တဲ့ အချိန် က စလို့ဖြစ်တာပါ..
အဲဒါ ကို စအောင်လုပ်တာတွေ မပြောလိုပေမဲ့
ခေါင်းဆောင် လုပ်သွားသူ က အဆောင်နေတဲ့ သူ မဟုတ်ပါဘူး
အဆောင်နေသူတွေ က သာ ကြားက ခံလိုက်ရတာပါ..
အခုဆို တိုင်းပြည် အရမ်းနစ်နာပါတယ်
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကျော် က မြန်ပြည်မှာ မာစတာတန်း တတ်ချင်လို့ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်း ကို သွားတော့
စစ်တပ် ကရယ် အစိုးရ ဝန်ထမ်း ဖြစ်မှ တတ်ခွင့် ရမှာတဲ့ ဘယ်လိုပဲကြိုးစားကြိုးစား တတ်ခွင့် မရပါဘူး
အဲလိုနဲ့ရေနံ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ် ကို လုပ်ပြီး ထရိမ်နင်တွေ တော့ တတ်ရပါတယ် မာစတာတန်း အတွက် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး
အဲလိုနဲ့စင်ကာပူ က Nanyang Technological University ကို မာစတာတန်း အတွက် လျှောက်တော့ တတ်ခွင့်ရပါတယ်
အဲဒီမှာ အဆောင်က အရမ်းအဆင်ပြေတာ ကို ပြောပါ့မယ်
၂၀၀၄ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ရက် ၂၀ ကျော်မှတတ်ရမဲ့ ကျောင်း ကို ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ မှာ ကျောင်းကို တိုက်ရိုက်သွားလို့ ရတာကို ပြောပါမယ်..
အဆောင် ကို အင်တာနက်က နေ လှမ်းပြီး ငှားတာပါ ဘယ်အခန်း ကို ရမယ် ဘယ်လိုလာရမယ်က အစ အီးမေးလ် ကနေ လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်
အခန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်Nanyang Heights က 33B မှာ အခန်း ကို ရပါတယ်
လေဆိပ် ကနေ တက္ကစီနဲ့အင်တာနေရှင်နယ် စတူဒန့်စင်တာကို တိုက်ရိုက်သွားပြီး သော့သွားယူပြီး အခန်း ကို ချက်ချင်းဝင်လို့ ရပါတယ်..
ပတ်စ်ပို့စာအုပ်မှာလည်း မြန်မာပြည်က စင်ကာပူ သံရုံးမှာလည်း ဗီဇာတုံး ထု စရာ မလိုပါဘူး
ကျောင်းတတ်မည့် သူ ကို အစစ အဆင်ပြေအောင် ဗီဇာရော အဆောင်ပါ လွယ်ကူအောင်လုပ်ပေးထားတာပါ..
ချက်ချင်းငွေသွင်းတာတွေ မလိုသလို အဲတုန်း က အင်တာနေရှင်နယ် စတုဒန့် စင်တာတောင် ပြင်နေတုန်း အချိန် ရောက်သွားတာ တစ်ခုခုဆိုဖုန်းဆက်ဖို့ဗီဇာ ကို သုံးနှစ်စာ သွားယူဖို့အခက်အခဲရှိရင် စာရေးပေးမယ် ဆိုပြီး အဆောင် ကို စီစဉ်ပေးထားတာပါ..
တစ်နှစ်တော့ အဆောင်မှာ နေခွင့်ပေးပါတယ် တနှစ်ကျော်ရင် အပြင်ဆောင်မှာ နေရမှာပါ လူသစ်တွေ အတွက် ဖယ်ပေးရမှာပါ
အခန်းဖော် ဗီယက်နမ် က Ph.D တတ်နေပြီး အိမ်ထောင်နဲ့ကလေး ရှိတော့ သူ့ အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးလာတော့ ကျောင်းက နေစရာ အခန်း အဆောင် ကိုမိသားစု နေစရာ စီစဉ်ပေးပါတယ်
အဲလောက်ထိ နိူင်ငံတကာ က တက္ကသိုလ်တွေ က အဆောင်ကို စနစ်တကျ လုပ်ပေးထားပါတယ်..
ရေကူးကန်ရော လစဉ်ကြေးပေးပြီး သုံးလို့ ရအောင် အထိ လွယ်ကူပါတယ်..
မြန်ပြည်မှာ အဆောင် စနစ် ကို မရှိအောင် လုပ်တာက အဆောင် နေသူတွေ ကို မနာလိုသူတွေ က ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြနေကြတာပါ..
အဆောင်က စာဖလှယ်ဖို့တစ်ဦး ကို တစ်ဦးရိုင်းပင်းဖို့ ရယ် မိမိ ကိုယ်ကိုယ် မိမိထိန်းကျောင်းနိူင်အောင် လုပ်ပေးရာနေရာပါ..
အဆောင်ဖျောက်လိုက်တာ ၁၉၉၆ ဒီဇင်ဘာ နောက်ပိုင်းမှာပါ..
၁၉၉၆ ဒီဇင်ဘာ အစကို အဆောင်နေကျောင်းသား က လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး
ဝါးလုံးရှည်နဲ့ မရမ်းပါနဲ့နာမည် အတိအကျ ကအစ ပြောနိူင်ပါတယ်...
အဆောင်က တိုင်းပြည် ကို ဒုက္ခပေးတာမရှိပါဘူး မျိုးဆက်သစ် ကို တိုးတတ်စေတာပါ..
အဆောင်ကြောက်ဒီမို ကရေစီ မဖြစ်စေဖို့လွတ်လပ်သောဒီမိုကရေစီ တိုင်းပြည်မှာ ခေတ်မှီသော အဆောင် ဖြစ်စေရန်ရည်သန်လျက်...
ဂျပန် မှာ ငလျင်လှုပ်မှာ ကို သတိပေးတာ ထွက်လာပါပြီ
မနေ့ကသတင်းစာမှာ ဘယ်နေရာ မှာ ဘယ်လို ဖြစ်နိူင်တာကို ဂရပ်စ်နဲ့ကို ရှင်းထားတာပါ..
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အရင်ကလို ဂတ်စ် တို့ မီးတို့ ကို ပိတ်တာထက် မိမိကိုယ်ကိုယ် သတိထား ကာကွယ်ဖို့ ပါ..
အခုနောက်ပိုင်း ဂတ်စ်မီးဖို တို့မီးတို့ က အလိုအလျှောက် ပိတ်တဲ့ စနစ်တွေ ရပ်တဲ့ စနစ်တွေ လုပ်ထားတာပါ..
မနှစ် က ဂတ်စ်မီးဖို ဆို မိနစ် ၃၀ ကြာရင် အလိုအလျှောက် ရပ်သလို အခုနောက်ပိုင်းက ငါးကင်ရင်တောင် အလိုအလျှောက် ပိတ်တာပါ လိုက်ကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး
တီဗီမှာလည်း သတိထားစရာတွေ ပြောပေးနေပါတယ်..
သဘာဝဘေး မှ ကင်းဝေးနိူင်ကြပါစေ
ဂျပန် မှာ ငလျင် လှုပ်မှာ ကို သတိထားဖို့ လိုလာပါပြီ
Shinokubo က ဂျပန်ရိုးရာ
Posted by ငဝန်နဒီ at 7:43 PM No comments:
ဖုန်းတွေ နောက် ဆို အလကားတောင် ရတော့မှာ..
ဖုန်းတွေ အခုဆို ၂သိန်းတို့ဘာတို့ ပြောနေလိုက် တာ အခုတောင် နိူင်ငံတကာက ဖုန်း မြန်မာပြည်ယူလာလို့ ရပြီဆိုတော့
မြန်ပြည် ရောက်ရင် ဖုန်းတွေ ဝယ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး နိူင်ငံတကာဖုန်း ကို ဖုန်းဘေလ်ဈေးကြီးကြီးပေးပြီး ဆက်ရင် ရပါတယ်
သက်သာချင်ရင်တော့ နည်းပညာလေးပါလေး နားလည်အောင်လုပ်လိုက်ရင် ဖရီးနီးနီး ကို ရလိုက်မှာပါ
ဒါဆိုတော့ ပြည်တွင်းဖုန်းက သိန်းဂဏန်းမှာ ရှိသေးတာပါ..
ဖုန်းဘေလ် တစ်နှစ် အတွင်း ၃သိန်း၎သိန်းကျသူတွေ ကို ဖုန်းအလကားတောင်ပေးလို့ ရပါတယ်
နိူင်ငံတကာမှာ လစဉ်ဈေးယူထားပြီး အလကားပေးနေတာကြာပါပြီ
မြန်မာပြည်လည်း အဲလိုလာတော့မှာပါ..အခုတော့ ဖုန်းဘေလ်တတ်တာ မသိသာသေးတော့ ဖုန်းဈေးကြီးနေတာပါ..
ဖုန်းတွေ နောက် တစ်နှစ် ကနေ ငါးနှစ်အတွင်း မှာ ဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားစရာမလိုတော့ပါဘူး
ဖုန်းက အသုံးအဆောင်တစ်ခုလို ထားတာပဲဖြစ်တော့မှာပါ...အခုတောင် ဈေးကြီး လို့ မဝယ်တာလို့ ထင်ကြတာ..တကယ်တော့ လူတစ်ယောက်ကို ဖုန်း ငါးလုံးခြောက်လုံး ကိုင်စရာ မလိုပါဘူး
ရွာသာကြီးသွားခါနီးရင်တော့ ကိုင်တာကတော့ ဖြစ်သင့်ပါတယ်
လူတိုင်း ဖုန်းဝယ်ပြီး အဝင်ခေါ်တာ ကိုပဲ စောင့်နေတာတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်းများလာမှာပါ..
အခုတောင် ဖုန်းလိုင်းတွေ ပြန်ချောင်လာတော့မှာပါ လိုင်းတွေ ထပ်မတပ်ရင် ဖုန်း အဝယ်မလိုက်
ဖုန်းက စားစရာမှမဟုတ်တာ သုံးပြီးလည်းပြန်သုံးရတာကိုး
ဖုန်းလိုင်းတွေ ဖြုတ်ဖြုတ်ထားတဲ့ အကျင့် ရှိသူတွေ လစာ နည်းနည်း လာရင် ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ဖြစ်သွားတော့မှာပါ
နောက်ဆို ကုပ္မဏီတွေ က ဝန်ထမ်းတွေ ကို ဖုန်းဝယ်ပေးပြီး အချိန်တိုင်း သူပိုင်အောင် သုံးလာတော့မှာ..အဲကျရင် ဖုန်းက လူကြီးမင်းနဲ့ ညားလေ ကြိုက်လေဖြစ်နေမှာပါ..
ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေ က အရင် အလကားရနိူင်သလို နောက်ဆို လိုင်းဟောင်းလို့ လဲချင်သူတွေ ဖုန်းနံပါတ်သစ် လိုချင်သူတွေ က ဖုန်း ကို ဈေးပေါနဲ့ ရောင်း အလကားပေးသင့်သူ ကို ပေးနဲ့ 
ဖုန်းက နောင်ဆို အလကားကို ရနိူင်မှာပါ.
ထွင်းဖောက်မြင် အိုင်ဖုန်း ဖြစ်လာနိူင်သလား
လာမည့် လ ဆို အိုင်ဖုန်း ၅ က တော့ ထွက်မယ်ပြောတာပဲ... အိုင်အက်အို ၆ ကတော့ စမ်းနေပါပြီ
ဘလောက်စ် တစ်ခု က ကိုယ်ယောင်ပျောက် မာစီးဒီး ကို ရေးတာတွေ့ တော့ အိုင်ဖုန်း ၅ ကရော အဲလိုဖြစ်လာနိူင်သလားပေါ့
အရင်က အိုင်ဖုန်းတွေ မှာ ကင်မရာ နှစ်လုံးတပ်တာ မထူးပေမဲ့ ထွင်းဖောက်ဖို့ကို အဲဒီကင်မရာ ကို အထူးထပ်ပြုလုပ် ပြီး စကရင် အပြည့် ပေးတာနဲ့ထွင်းဖောက်လို့ ရနိူင်ပါတယ်
လေဆာ အလင်းကို ဘေစ့်တစ်ခု ကနေ လွတ်ပေးပြီး ထွင်းဖောက်စကရင်ပြား ကို သုံးရင် လည်းရပါတယ်
ဒီနေရာမှာ စရိတ်ကြီးမှုက ပထမ တစ်ခုကစရိတ် ကြီးမှာ ဖြစ်လို့ဖုန်းအတွက် မလွယ်လှပါဘူး ဘေးသားချန်ပြီး ထွင်းဖောက်ဆိုရင်တော့ သက်သာပါတယ်
နာရီ အဲလိုမျိုး လွန်ခဲ့သော ၈နှစ်လောက်က ရှိဖူးပါတယ် ..အခုကတော့ အလင်းဖောက် ဖလင်ပြားရယ် လေဆာကို သုံးရင် အိုင်ဖုန်း ကတော့ ထွင်းဖောက် မြင်နိူင်လာမှာပါ..
အရမ်းစောလွန်းရင် စီးပွားရေး အမြတ် ကို တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်း ယူတတ်တဲ့ အက်ပယ်စ်က ထုတ်ဖို့ ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိူင်ပါဘူး
အခုအသစ်မှာ အိုင်အက်စ်အို ၆ ပါလာတာ ရယ် စကရင် တဖက်ဖက်ပြည့်တာရယ်လောက်တော့ ထူးလာနိူင်ပေမဲ့
ထွင်းဖောက် ထွက်ဖို့ ဆိုတာကတော့ ဖြစ်နိူင်ရင်တောင် အက်ပယ်စ်က မထုတ်ပါဘူး
သူ့ စီးပွားရေး အရ နှစ်ချို့ ထုတ်မှာပါ...
ထွင်းဖောက် ကို လိုချင်ပေမဲ့ မျှော်လို့ မရသေးတာရယ် မာစီးဒီးမှာ စမ်းတာရယ် ဆိုတော့ အိုင်ဖုန်း ၅ ကတော့ နည်းနည်းလေးပဲ ထူးလာမှာရယ် ဂလက်စ်စီ ကလည်း ၄ဂျီ ပါလာတာပဲ မြန်လာတာရယ် အဲဒါ ကိုတော့ အိုင်ဖုန်း ၅ က လုပ်မှာသေချာပါတယ်
ကွန်ပျူတာလို ဖြစ်နိူင်လာတာလေး ရှိနေပါတယ် ဝင်းဒိုး ၈ နဲ့မတိမ်းမယိမ်းထွက်မှာဆိုတော့ အဲလိုကလည်းမျှော်မှန်းလို့ မရသေးပါဘူး
တစ်ခုကတော့ ဖုန်းလိုင်းတွေ အရမ်းသက်သာတာ ကို သုံးလို့ ရသွားတာပါ..
၄ ဂျီ က ကွန်ပျူတာလို မြန်အောင် အထောက်အကူ ပြုမှာကိုး
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ထွင်းဖောက်မြင် အိုင်ဖုန်း လိုချင်ပေမဲ့ မရနိူင်သေးကို သိလိုက်ရပါတယ်..
ငဝန်နဒီ မြစ်ရေ ကြီး မှတ်တမ်း
မဇ္ဈိမ နှင့် ဒီဗွီဘီ မှ ဓာတ်ပုံများ စုစည်းထားပါသည်..ပုသိမ်မှာ နှစ်စဉ် အနည်းနဲ့အများတော့ ရေတတ်တတ်ပါသည်။
ဒီနှစ် က ဝါထပ်တော့ မြစ်ရေတိုးတာရယ် ပေါင်းလိုက်တော့ ရေ အတော်ကြီးသွားတာပါ..
ငယ်ငယ်တုန်း ကဆို ၁၉၈၀ လောက်ကပေါ့ မူလတန်းကျောင်း ကပြန်လာရင် ယိုးဒယားကုန်းလမ်းမှာ ၁ပေ ကျော်ကျော်လောက် ကတ္တရာလမ်းပေါ် ရေကျော်နေတာကို ဆော့ရင်းပြုရင်း မိုးတွင်းဆို အိမ်ပြန်ကြရတာပါ...
ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုလောက်လည်းကျော်ရော ကမ်းနားလမ်းမှာ ရေ တွေ တစ်ပေလောက်အထိတတ်လာပါတယ် နောက်တော့ ငဝန်နဒီ ရဲ့ဘောင် ကို ရေကျော်လာပါတော့တယ်..
ညနေ ဆို ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း တံတား ကို ရေထဲကဖြတ်ပြီး ရန်ကုန်သွားဖို့သင်္ဘောပေါ်ကို သွားကြရပါတယ်။
အဲဒီတံတားဘေး က ကွန်ကရစ်ဘောင် က ညနေ ရေတိုးချိန်ဆို ရေအောက် ရောက်သွားပါတယ်... အနီးက ကုက္ကိုပင် အနီးက မြောင်းဖုံးရယ် ဂျိုင့်ရယ် ရေ အောက်ရောက်နေချိန်ဆို ပေါင်လယ်ကျော်ကျော်လောက် ကို မြုပ်တာပါ..အဲအနား ကို လူတွေ မသွားအောင် ကလေးတွေ မရောက်အောင်သတိပေး နေကြပါတယ်..
မြစ်ရေ က နေ့ လည် ၁၂ နာရီ လောက်ဆို တိုးချင် လာပါတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ရေတတ်မိုး ကပါ တစ်ခါတည်း လိုက်ပါ ရွာချတတ်ပါတယ် တစ်နေ့ တစ်နေ့တစ်နာရီဝန်းကျင်လောက် အချိန်နောက်ဆုတ် ရွာတာ တိုးတာ ရှိတတ်ပါတယ်...
လပြည့် ဆို ပို သတိထားရပါတယ်..
အရင်ကတည်းက မြစ်ရေကြီးတာ မဆန်းပေမဲ့ တစ်ချို့ နှစ်တွေ တော်တော် ခံကြရတာပါ..အခုတော့ မီဒီယာတွေ က ဖော်ပြတော့ တော်တော်များများ ကူညီလို့ ရနိူင်မှာပါ..
ပုသိမ် ရန်ကုန်လမ်းဆို တော်တော် များများရေကျော် တာပါပဲ ကြိုးကြာကွင်းနားရယ် ဒါးက နားရယ် ကန်ကလေး လမ်းဆုံနားတွေ ဆို တော်တော် ဆိုးပါတယ်
ရထားလမ်းတွေ ပတ္တလား တီးမလိုတောင်ဖြစ်တာတွေ ရှိပါတယ်
ဖြတ်လမ်း အသစ်ဆို သွားလို့ မရတော့လို့သုံးဂွ ကနေ အရင် လမ်းဟောင်းကနေ ကျောင်းကုန်း ကို သွားရတာတွေ ရှိပါတယ်..
အခုတော့ ပုသိမ် ကို မရောက်ဖြစ်တာ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခု ကျော်သွားပြီ ဆိုတော့ ဘယ်လိုမှ မပြောနိူင်ပေမဲ့ ပုသိမ်တံတားပေါ် ကို တော့ ဖြတ်သွားချင်စိတ် ဖြစ်မိပါရဲ့ ..
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:19 PM No comments:
အရင်အတိုင်း တရုတ်ဖုန်းပဲ ကောင်းပါတယ်
မြန်ပြည်ကို အိုင်ဖုန်းတွေ ဘာတွေ ရောက် သုံးရတာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်.. နေရာပေါ်တော့ မူတည်တာပေါ့
တရုတ်ဖုန်း ကြတော့ နေရာတော်တော်များများ မှာ အဆင်ပြေတော့
အိုင်ဖုန်း က ၅ သိန်း ၆သိန်း လောက်
တရုတ်ဖုန်း က ၁သိန်းခွဲ ကျော် ကျော်
ကဲ ဖုန်းနှစ်လုံး ဈေးကြီး ပြီး နေရာစုံ မရ
ဈေးပေါပြီး နေရာ စုံ ရတာ ကို ပဲ သုံးနေရအုံးမည်...
တချိန်ချိန်တော့ ဂျပန်မှာတောင် ဆော့စ်ဘဏ် က အခု မှ လိုင်းမိသလို ရှိလာတာ မြန်ပြည်ဆိုတော့ ဖြည်းဖြည်းပေါ့
အခုတော့ ဈေးပေါတာ လည်း အဆင်ပြေနေတော့ ဈေးကြီးတိုင်း အဆင်မပြေ သလို ရှိတာ ကို အသိပေးတာပါ.. အိုင်းဖုန်းကြီး လိုင်းမဝင် လို့တရုတ်ဖုန်း က ဟုတ်နေတာပဲ..
အိုင်ဖုန်း က နေရာ တော့ စကားပြောပါတယ် မြို့ ပြင် လူရှင်း ရင် ဖုန်းလိုင်းရှင်းပ..
တရုတ်ဖုန်းတော့ ဘက်ထရီ အကုန်မြန်တာရယ် ပူလာတာရယ်တော့ ရှိတာပေါ့ ပြောလို့ သုံးလို့ ရတာကိုး
အိုင်ဖုန်းကတော့ ...အေးအေးဆေးဆေး..လူကြီးမင်းရယ် ဆိုပြီး ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ 
ကုန်ကျစရိတ်များ သက်သာ နိူင်ကြပါစေ..
လူ အခွင့်အရေး အဘိဓာန်( လူ ဆိုပြီးရော)
လူအခွင့်အရေး ဆိုတာ လူတွေ အတွက် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော အခွင့်အရေး
သို့ သော် နိူင်ငံတစ်ကာ ကို အော်
ငါနိူင်ငံမှာတော့ ငါဟာငါ ဘယ်သူဖမ်းဖမ်း
ဘယ်နိူင်ငံကဘဲ ခိုလုံခွင့်ပေးပေး ငါနိူင်ငံထဲမှာရှိရင် လူ့ အခွင့်အရေး အရ ငါအခွင့်အရေး ကွ
အင်္ဂလန် ရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး..
မီဒီယာတွေ အသံတိတ် လူ့ အခွင့်အရေးဆိုတာ နိူင်ငံကြီးက အော်တာတဲ့ သူကြတော့ သူ့ အခွင့်အရေး
သတင်းတွေ ပိတ်တာ လူ့ အခွင့်အရေး သူများနိူင်ငံသား ဥပဒေ ကို ပြင်ချင်တာ လူ့ အခွင့်အရေး
နယ် ကျော် ပစ်သတ် အိန္ဒိယ ရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး
ပင်လယ်ထဲက လာတဲ့သူ ပင်လယ်ထဲ ပြန်လွတ်တာ ထိုင်း ရဲ့ လူ့ အခွင့်အရေး သူ့ လာလမ်းအတိုင်းပြန်လွတ်တာလေ
မြန်ပြည် က တော့ သမ္မတ ကပြော တာ လူ့ အခွင့်အရေး ငြိမ်းချမ်းရေး လေသံ
စစ်တပ်က စစ်တိုက်နေတာ က လူ့ အခွင့်အရေး မတိုက်ရင် အသုံးစရိတ်မရဘူးလေ
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုပြီး အော်သာအော် ဆော်ဆော်သာဆော်
ဘယ်သူဘာပြောပြော လူ့ အခွင့်အရေး ဆိုပြီး လုပ်...
ကိုယ် တိုင် လုပ်လို့ ရတာ အကုန်လုပ် ငါ့အခွင့်အရေး ...ငါ သည် လူဖြစ်၍ ငါ့ အခွင့်အရေး သည် လူ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်သည်..
ငါ = လူ
အခွင့်အရေး = အခွင့်အရေး
ငါ့ အခွင့်အရေး = လူ့ အခွင့်အရေး
(အကယ်၍ သင် သည် သတ္တဝါ တစ်ကောင်ကောင် တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်လျှင် လူ့ အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးပေမည်..
(သင်သည် လူဖြစ်ရန်သာ လိုသည်)
ဒီမိုကရေစီ ရှိမရှိ ကြည့်ချင်ရင် အလကားမရဘူး
မြန်ပြည် က ဒီမိုကရေစီ စနစ် ကို ကူးပြောင်းတော့ နိူင်ငံတကာ ကို ဖိတ်တာပေါ့
မြန်ပြည်..... လာလည် လို့ ရတယ် နော်..
နိူင်ငံတကာ... မယုံဘူး လာမကြည့် နိူင်ဘူး
မြန်ပြည်.... အေးလေ အလကား ဆိုတော့ ဘယ် တန်ဖိုးထားပါ့ မလဲ...
တနှစ် လောက် လည်းကျော် ရော...
မြန်ပြည်... မယုံရင် လာကြည့် နော် ဒေါ်လာ တွေ ပါ ပါမှ ရမယ်...
နိူင်ငံတကာ.... ဒေါ်လာ တစ်သန်းနှစ်သန်းလောက် နဲ့ တော့ သွားမကောင်းဘူး များများသယ်သွား မှ တော်ကြာ ပိုဆိုးလာမှာ စိုးလို့ ..
မြန်ပြည်.... အေးလေ ပိုက်ဆံလည်းရ ဒီမိုကရေစီလည်းပြ... မပိုင်ဘူးလား ...ဒါ အကင်းပဲ ရှိသေးတာ..
နောက်လည်း ပေးရအောင် ပိုက်ဆံတွေ များများစုထားနော်...
Posted by ငဝန်နဒီ at 1:59 PM No comments:
စာတွေ မရေးဖြစ်ရခြင်း ။ ဆန္ဒပြ ရင် ။ မိဘ ကို ကြိုးချီမည့် သူများ
စာတွေ ကတော့ ရေးချင်ပါရဲ့လူမိုက်တွေ အကြောင်း ရေးဖို့ များနေတာရယ် လူမိုက်တွေ အကြောင်းရေးရင် အကျိုးဖြစ်ဖို့ ထက် အကျိုးမဲ့ က များနေလေတော့ အကုသိုလ် များခြင်းထက် မရေးတာ ကမှ ကောင်းမယ် ထင်တာနဲ့မရေးဖြစ်တာပါ..
အခု တလော ထူးတာတွေ ကတော့ ထူးထူးခြားခြား မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့
အိမ်ဈေးတွေ က အခုထိ တတ်နေတာတွေ ရှိနေသေးတာ ကို အခွန် တိုးကောက်ပြီး ထိန်းမယ် ဆိုပဲ
တသက်လုံး အခွန် ရှောင်လာတာ အခုမှ အခွန်ဆောင်တာ တင်းကျပ် မယ် ဆိုတော့ အံသြစရာပါ
တင်းကျပ် ပါပြီတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ က လစာ လုံလောက် လို့ လား ဒေါ်လာ ဈေး က ထိန်း လို့ရသေးလို့ လားပေါ့ ဘဏ်တွေ မှာ ဒေါ်လာတွေ လိုသလောက် ဝယ် လို့ရသေးလို့ လား..
လာဘ်ပေးရမဲ့ ပိုက်ဆံ က အခွန် ပေးဖို့ ရဲ့တဝက် လောက် တောင်ပေးစရာ မလိုတာပါ..
ရန်ကုန် မှာတော့ ကားတွေ တအားပေါနေလို့လမ်းတွေ ကျပ် ပါကင်တွေ မရှိ ဖြစ်နေတာ ကတော့ နည်းစနစ်တွေ လိုနေသေး တာပါ ကားတွေ သွင်းရမဲ့ အစီးရေ အထိ ရောက် ဖို့အဝေးကြီး လိုနေသေးတာတောင် ဈေးတွေ တော်တော် ကျနေပါပြီ
ပုံမှန်လည်ပတ်သော ဈေးဖြစ် ဖို့ကတော့ ဒေါ်လာ ကလည်းဈေးတည်ငြိမ်သင့်သလို အခွန် ကလည်း သတ်သတ်မှတ်မှတ် ဘယ်တော့ ဖြစ် မလဲ မသိရသေးတာပါ..
အိမ်ဈေး က မကျတော့ နိူင်ငံ တကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံ မဲ့ သူတွေ က နေရာ ဖိုး ကို ပေးတာနဲ့ရင်းနှီးစရာတွေ အဲဒါနဲ့ တင် တော်တော် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေမှာပါ...
အိမ်ဈေး ဘာကြောင့် တတ်လို့ ရတာလည်း ဆိုတော့ အစိုးက က ပိုင်ဆိုင်တာ ဘာမြေယာ ဘာ စီမံချက် တွေ ဆိုတာထက်
မြန်ပြည်သူတွေ နေစရာ အိမ်တွေ ဆောက်မပေးနိူင်တာပါ
နေစရာ မစီစဉ် နိူင်သရွေ့ တော့ အိမ်ဈေးက အစိုးရ လက်ထဲမှာမဟုတ်ပဲ မြေရှင်တွေ ကို အစိုးရ ကြောက်နေရမလို ဖြစ်နေမှာပါ..
အစိုးရ အဆောက် အဦး နေစရာ အိမ်တွေ ဖော်ထုတ်ရမှာပါ မြေပေးတာ က မြေကို ပေးပြီး အစိုးရက မြေယာမဲ့ဖြစ်ပြီး မြေဈေးကြီး ဖို့ သာဖြစ်စေတာပါ..
အစိုးရ ပိုင် တိုက်တာ တွေ နေအိမ်တွေ ကို လူဦးရေ သန်း ၆၀ ဆို အိမ် ၁၀ သန်း အနည်းဆုံး လိုသလို အခု ရှိ အိမ်က ဘယ်လောက် ၁သန်း ရှိတယ် ဆို နောက် အိမ်အလုံးရေ ဖြစ်ဖြစ် ကွန်ဒိုလို တိုက်ခန်း ဖြစ်ဖြစ် ၉ သန်းလောက် ဆောက်ဖို့လိုနေတာပါ..
ပြည်သူတွေ အတွက် နည်းနည်းလေးတောင် လုပ်မပေးနိူင်ရင် နိူင်ငံတကာ က ဒီလို အိမ်မြေ ဈေးတွေ နဲ့ဘယ်လိုမှ ဝင်လာဖို့မဖြစ်နိူင်ပါဘူး
ဒေါ်လာဈေးတတ်ရင် အလုပ်သမားဆန္ဒ ပြ နိူင်သလို နေစရိတ် ကြီးရင် လည်း လုပ်ငန်းရှင်တွေ အိမ်ရှင် မြေရှင် တွေ လုပ်ကြွေးသလို ဖြစ်ပြီး သူနိူင်ငံ ကို လက်ချဉ်းသက်သက် ပြန်ဖို့ ပဲ ဖြစ်လာမှာပါ...
ကွန်ဒို ငှား တာ တစ်လ ကို ၆၅ သိန်း ဆိုတော့ နေဖို့ ပဲ ရှိသေးတာ ဟော်တယ်ခ က တရက် ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ ကျော် ကဲ ဘယ်လို လုပ်ငန်းရှင် တွေ လာနိူင်မှာလဲ..
နိူင်ငံတကာ မှာ တော်တော်များများတိုင်းပြည်တွေ မှာ တော်ရုံငွေ နဲ့ရင်းနှီးမြှပ်နှံခွင့်ပေး နေထိုင်ခွင့်ပါ ချပေးတာ အပြင် နေစရာ အတွက် ရင်းနှီးမတည်ငွေ ရဲ့၅ ရာနှုန်းတောင် မရှိတာပါ..
မြန်မာ ပြည်မှာတော့ အလုပ်လုပ်စရာ မြေနေရာ နဲ့ တင် ရင်းနှီး မတည်ငွေ တွေ မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီး တစ်ချို့ နေရာဆို အနားတောင် ကပ်မရနိူင်တာ..
လုပ်ငန်းလာလုပ်ချင်ရင် ဘီလီယံနာ အရင် ဖြစ်အောင် လုပ် မြန်မာ ပြည် မှာ လာလှူ လိုက်ရမှာ လို ဖြစ်နေပါတယ်...
ဒေါ်လာ က ဝယ်ချင်သလောက် ဝယ်မရ အခုဆို အက်အီးစီ တွေ ပြန်ရောင်းတော့ ရောင်းသလောက် မဝယ်နိူင် ဆိုတော့ မြန်မာ စီးပွားရေး ဦးမော့ မမော့ တော့ မသိဘူး
ဘဏ်တွေ က ဦးမော့ ဖို့နှစ် အတော်ကြာမှာ လားတော့ မသိ..ဘဏ်တောင် ဒီလို ဖြစ်နေရင် ကျန်တာတွေ ကတော့ မသေချာမရေရာ သလိုပါ..
ကားလေး တစ်ခုပဲ အခြေအနေကောင်းလာတာ ဒါတောင် အဲဒါကြောင့် စီးပွားပျက်သွားသူတွေ အတော်များများရှိနေမှာပါ..
ကောင်းတာကတော့ တော်တော်များများ ကားဆိုတာ အနားကပ်လို့ ရသွားတာပါ..အထိနာ တာကလည်း အရင် စားထား သိမ်းထား မတရား ရထားသူတွေ အထိများတာ ပါ အဲလူတွေ နဲ့ ပေါင်း အချင်းချင်း အမြတ်လိုသူတွေ သာ အဖြစ်များတာပါ..
နောက်တစ်ခုက ဆန္ဒပြတိုင်းကောင်းတယ် ထင်သူတွေ ပါ..
ဖယောင်းတိုင် ဆန္ဒပြလိုက်တာ မြန်ပြည် အောက်ပိုင်းမှာ ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ကြီး ထလည် ပါရောလား..
ဆန္ဒပြရင် အကျိုးအပြစ် ရယ် လူအများအသုံးချ ခံဖြစ်သွားမှာ လား ကို တွေးဖို့ လိုသလို..
ဆန္ဒပြရင်း အစိုးရနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ လို့အခက်အခဲဖြစ် ရင် မီဒီယာတွေ က အဲဒါမျိုးဆို မသိသလို နာစည်း နေတာပါ..
ဘယ်လိုမီဒီယာတွေ လည်းမသိ ပြည်သူအတွက်မဟုတ် သူထမင်းစားရဖို့ပြည်သူတွေ ကို ထောင်ထဲပို့ ဖို့ ဆိုရင် တော့ မကောင်းပါဘူး
ပုသိမ်ရန်ကုန်လမ်း ပိုတောင် ရှည်လာတာ မီဒီယာ တွေ လမ်းဘယ်လိုသွားတာလည်း မသိဘူး ကွေ့ ပတ်သွားတတ်တာ မီဒီယာတွေ အကျင့်လားတော့ မသိပါဘူး
ဆန္ဒ ပြ မယ်ဆိုရင် ခွင့်ပြုမိန့် တွေ တင် ရတာတွေ ကတော့ ဟုတ်ပါပြီ ရဲ ဘယ်နှစ်ယောက် စောင့်ရှောက်ပေးမှာလည်း ခွင့်ပြုမိန့် တောင်းသူတွေ ကသိရမှာဖြစ်သလို
ဘယ် နှစ်နာရီ ကနေ ဘယ်နှစ်နာရီ အထိ
ဘယ်နေရာ ကနေ ဘယ်နေရာ အထိ လုံခြုံရေး ဘယ်လောက် တာဝန်ယူပေးမှာလည်း ကို အမိန့် ချပေးသူဆီ က တောင်း ဆိုရမှာပါ..
ဆန္ဒပြပါပြီ ဘာ ကို ပြချင်တာလဲ ပေါ့
အဲဒါ က အဓိကပါ..
မီးမလာတာဆို ဘာအတွက်ကြောင့် ပြတာလည်း မီးမရှိသေးတဲ့ နေရာ အတွက်ရော..နောက်အကျိုးဆက်ကဘာလည်းပေါ့..
မီးအတွက်ပြလိုက်တာ ကျောက်မီးသွေးစက်ကြီးလည်တော့ အသုံးချခံ ဆန္ဒပြပွဲ ဖြစ်သွားပါလေရော..
အလုပ်သမားတွေ ဆန္ဒပြတာ ကိုလည်းကြည့် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြတာ ဆိုကြည့် အလုပ်ရှင် က အငတ်ထားချင်လို့မဝရေစာပေးပြီး ခိုင်းစေနေတာ အကြင်နာတရားမရှိတဲ့ အလုပ်ရှင် ကို အဲလို ဆန္ဒ ပြစရာ မလိုပါဘူး
အားရှိအောင်နေပြီး ရေရှည် လုပ်ငန်းမလည်ပတ်နိူင်အောင် လုပ်ရမှာပါ..
ဘယ်သူ ကြောင့် လည်နေတာလည်း လုပ်အားမရှိရင် လည်မရတာ က အလုပ်သမားတွေ လုပ်ရသလို ဆန္ဒမတူသူတွေ က လည်ပေးနေရင် ဆန္ဒပြသူတွေ အတွက် အားနည်းနေရင် ကုန်ကြမ်း ကို ဘယ်လိုမရောက် အောင် လုပ်ရမှာတို့ 
စက်ရုံ အဝင်အထွက် ပိတ်တာထက် ကျဉ်းအောင် လုပ်တာတို့ တွေ လုပ်ရမှာပါ အရင်းအမြစ် ရပ်အောင် မီဒီယာ ကို အသုံးချ ဘယ်နိူင်ငံ ကို ပို့ တာ က အစ သိအောင်လုပ်ပြီးမှ ဆန္ဒပြ ရမည့် အပြင်
ဖိနှိပ်ခံ ရတာတွေ ကို ဘယ်နေ့ ဘယ် ရက် ဘယ်အချိန် ဘယ်သူ ကို ပြီးခဲ့သော ဘယ်နှစ်နှစ် က အစ အတိအကျ နဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တွေ စုစည်း ပြီးမှ ခံရတာတွေ ကို စုဆောင်း တင်ပြ မီဒီယာ မှာ တင် မြန်မာ လိုရော အင်္ဂလိပ်လိုရော ဘာသာပြန်လို့ ရရင် ပြန် မရရင် လုပ်နိူင်သူတွေ ကို အကူ အညီတောင်း
ပြီးမှ ခွင့်ပြုမိန့် ယူ မယူခင် လိုချင်သော အချက် အလက်တွေ ဘယ် နှစ်မျိုး ကို အတိအကျ ရယ်
နိူင်ငံတကာ စံနှုန်း က ဒီလို အခု တောင်းတာ က ဒီလို နှိုင်းယဉ်ပြီး စနစ်တကျ တောင်း ဆိုရမယ့် အပြင်
အဲဒီပတ်ဝန်းကျင် က ပြည်သူ့ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် က ဘယ်သူ အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန် ရှိသူ က ဘယ်သူ က အစ ဘယ် လိုလုပ်ပေးတာ ဘယ်လို မလုပ်ပေးတာ ရယ် ဘယ် ပါတီ က လူ ကအစ အသေးစိတ် စနစ် တကျ လုပ်ဆောင် မှ ဆန္ဒပြ ပွဲ မအောင်မြင် ရင်တောင်မှ အခြေအနေ အရပ်ရပ် ကို မီးမှောင်း ထိုးပြ အဆုံးသတ် ပေးရမှာပါ.. နောက်တစ်ကြိမ်ဆို ဘာလိုတာ ကို ပြန်ကြည့် အောင်မြင်အောင် ထပ်လုပ် မလုပ်ရင် ဒီမိုကရေစီ အစိုးရမဟုတ် အာဏာရှင် အစိုးရ လို ပြောပြီး အဆုံးသတ် လိုက်ရင် အစိုးရ က လုပ်ကို လုပ်ပေးရမှာပါ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ ဖြစ်ချင် ရင်ပေါ့..
အမြင်မတော် ကနောက် ဆုံး ကတော့
ကလေးငယ် လေးတွေ ကို ထိန်းရခက် တော့ တစ်ချို့ မိဘ တွေ မိခင်တွေ ဖခင်တွေ က ကြိုးနဲ့ ဆွဲ ပြီး ထိန်းတာ ကို ဂုဏ်ယူစရာ လိုလို ဘာလိုလို လုပ်နေတာ ကို တွေ့ ရတာပါ
အဲလိုဆိုတော့ အဲဒီကလေး ကြီးလာလို့အဲဒီမိဘအသက်ကြီး လို့ ပြန်ထိန်းရရင် ကြိုးနဲ့ ချီပြီး အိမ်မှာထား ခဲ့ အလုပ်သွား ရင် အဲဒီ ကလေး ကမှားသလား အဲဒီမိဘ က မှားသလားပေါ့
ကလေးဆိုတာ ဆိုးတာတော့ ဆိုးတာပေါ့
သူ့ကို ကြိုးချီ မှ တော့ သူကလည်း ကြိုးချီ ပြန်ထိန်းရင် အဲဒီမိဘ ရင် မှာ ဘယ်လိုရှိမှာလည်း..
ဘယ်သူ မတရားတာလည်းတော့ မပြောချင်ပေမဲ့
မိမိထိန်းကျောင်းလာသောသူ သည် မိမိကို ထိုကဲ့သို့ ပြန်ထိန်းကျောင်း နိူင်သည် ဆိုတာ ကို သိဖို့ လိုပါတယ်
အခု နိူင်ငံတကာမှာဆို အမျိုးမျိုးတွေ့ နေရတာပါ မိဘတွေ ကို ဆက်ဆံတာ တွေ ကိုပေါ့ တကယ်တော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် အဲ လိုဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့တာ ကို သိစေချင်ပါတယ်.
အဲဒါမျိုးတွေ နဲ့ စာတွေ ရေးမယ်ကြံရင်း ရေးဖို့တွန့် ရင်း မရေးဖြစ်နေတာပါ..
လူမိုက် အားဖြောင်းဖြ ပြောဆို လေပြေ မလို သူထက် မိုက်မဲ ဆိုးဝါးဖြစ်ပျက် စနစ်တကျ ပေးအပ်ခြင်း က သူလိုအပ်သော ရလဒ်ပါတကား။ ။
စွယ်တော်ရိပ်မှာ ပြန်ဆုံခွင့် အတွက်လမ်းစလေလား
Posted by ငဝန်နဒီ at 8:04 AM No comments:
ဆမ်ဆောင်း က အိုင်ဖုန်း မတိုင်ခင် ထွက်မယ်
ဆမ်ဆောင်း က ဂလက်စ်ဆီ S-3ကို ထွက် ပြီးတော့ အိုင်ဖုန်း မတိုင် နောက် တစ်မျိုး ထပ်ထုတ်မယ် တော့ ကြားနေရပါတယ်..
S-3 ကတော့ 4G ရပါတယ် နယူး အိုင်ပက်စ် လိုပေါ့
4G ကဘာထူးလည်းဆိုတော့ ဂျပန်မှာတော့ နှုန်း အမှန်ဆို ၇၀ ကျော် Mb လို့ ဆိုပါတယ်..
အိုင်ဖုန်း ၅ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် နေ့ သင်္ဘေံင်္ာံတင်မည်
အိုင်ဖုန်း ၅ တော့ စက်တင်ဘာ တော့ ပြောတာပဲ
Posted by ငဝန်နဒီ at 12:09 AM 1 comment:
အမှိုက်ကို ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကျော် ကနေ ၈၀၀၀ အထိပေးဝယ်တဲ့...
စာတွေ မရေးဖြစ်ရခြင်း ။ ဆန္ဒပြ ရင် ။ မိဘ ကို ကြိုးချ...